१८ दिन देखि अस्पतालमा रहेका पूर्व राजारानी ज्ञानेन्द्र र कोमलको स्वास्थ्यको बारेमा अस्पतालले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती ! – Khabar Patrika Np
१८ दिन देखि अस्पतालमा रहेका पूर्व राजारानी ज्ञानेन्द्र र कोमलको स्वास्थ्यको बारेमा अस्पतालले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती !
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: ०:५५:५७
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल शाह कोरोना पुष्टि भएर १८ दिन देखि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार भएको अस्पतालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।